DEG-DEG) Madaxweyne Xasan Sheekh wiil uu adeer u yahay oo lagu dilay Muqdisho
somali Wed 07-10-2015 04:47:47
Kooxo hubeysan ayaa saakay degmada Wadajir ku toogtay wiil u adeer u yahay madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo lagu magacaabi jiray Liibaan Cusmaan Cilmi. Liibaan ayaa ahaa dhakhtar ka howlgala mid ka mid ah isbitaalada Imaaraadku leeyihiin ee Muqdisho ku yaalla, iyadoo aabbihii oo ay isku hooyo yihiin Xasan Sheekh uu dhawaan ku dhintay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhakhtartan ay toogteen rag hubeysan oo aan la garanayn haybtooda xilli uu ku soo socday isbitaalka uu ka shaqeynayay, illaa haddana lama oga sababta loo dilay. Sidoo kale, ma jirto cid illaa hadda sheegatay mas’uuliyadda dilka Dr. Liibaan cismaan oo madaxweynaha Somalia uu adeer u ahaa, sidoo kalena weli hay’adaha amniga ee dowladda Somalia kama hadlin dilkan.
Ugu dambeyn, ma ahan markii ugu horreysay oo kooxo hubeysan ay degmada Wadajir ku dilaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dad shacab ah, iyadoo horay loogu dilay degmadaas suxufiyiin, shaqaale dowladeed iyo shaca fara badan.